Wasiir Kuxigeenka Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo la dhaariyey – Wasaaradda Maaliyadda
Wasiir Kuxigeenka Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo la dhaariyey
November 27, 2016	in Warka
Xarunta madaxtooyada Garowe ayaa waxaa lagu dhaariyey Wasiir kuxigeenka dakhliga ee Wasaarada Maaliyada Puntland mudane Maxamed Jibriil Caateeye.
Munaasabadda dhaarinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey, masuuliyiin ka tirsan Maxkamada sare ee dawlada Puntland iyo qaar kamid ah saraakiisha Madaxtooyada.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa dhaarta kadib waxa uu kula dardaarmay in ay shaqadiisa uu si daacad ah u guto, iguana adeego dadka iyo dalka.
Sidoo kale waxa uu kusimaha Madaxweynuhu masuuliyiinta la dhaariyay illaahay uga baryey inuu ku asturo xilalka loo igmaday, isla ,markaana u sahlo sidii ay ugu adeegi lahaayeen shacabkooda,
Wasiir ku xigeenka dakhliga ee wasaarada Maaliyada Puntland Mudane Maxamed Jibriil Cateeye ayaa ballan qaaday kuna dhaartay in uu u adeegi doono bulshada isla markaana uu ka fogaan doono wax walba oo shaqada hakad gelin kara.
Wasiirka Maaliyadda Puntland oo kulan la qaatay Madaxa Bangiga Aduunka Soomaaliya[Sawirro]